Baadirigii beenta aduunyo gadoonka ku fashilmay oo mar kale quraafaadkiisii soo celiyey – SBC
Baadirigii beenta aduunyo gadoonka ku fashilmay oo mar kale quraafaadkiisii soo celiyey
Baadiri Harold Camping oo 89 sano jir ah isla markaana dhawaan been quraafaad ah ku sheegay in aduunku uu rogmanayo 21-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay ayaa markii uu ku fashilmay quraafaadkaasi wuxuu qirtey in uu galey khalad dhanka taariikhda ah, isagoo mar kale sheegay xili uu leeyahay aduunka ayaa gadoomaya.
Baadirigan oo madax u ah koox xagjiriin Kirishtaan ah oo lagu magacaabo Radio Family oo qalabka warbaahinta gaar ahaan mowjadaha raadiyeyaasha ku faafiya diinta Kirishtaanka ayaa ku andacooday in uu si khalad ah wax u xisaabiyey, isagoo sheegay in 21-ka October ee sanadkan ay tahay maalinta Yuumul khiyaamaha ee aduunyadu dhamaanayso.
Hadalkii uu ku dhawaaqay ee ay sida weyn u rumeeyeen taageerayaashiisa isla markaana malaayiin doolar ku khasaartey ayuu ka gaabsadey in uu siiyo cudur daar, waxaana sidoo kale uu diidey in uu sheego talooyin ay ku soo ceshan karaan dhaqaalihii xooganaa ee ay ku waayeen sheekadaasi quraafaadka ah.
Ururkiisa uu iska leeyahay waxay ku bixiyeen malaayiin doolar fariimo loo adeegsadey qoraalo, boorar, Raadiyeyaal & waliba olole balaaran oo dadka lagu wargalinayey in khiyaamihii uu dhacayo 21-ka May.
Qaar ka mid ah dadka fikirkiisa raacsan ayaa bixiyey lacagihii keydka nolashooda ay u haysteen iyagoo aaminsanaa in ay dhici doonto aduunyadu gadoonka.
“Aad ayaan u qoslay, una Holpilns yaabay, ayuu yiri” Jeff Hopkins oo ahaa soo saare telefishin oo degan magaalada New York kaasi oo wixii dhaqaale ee u keydsanaa isagoo sidoo kale gaarigiisii siiyey kooxda wadey olalaha si ay ugu faafiyaan fariimaha ay baahinayeen in aduunka uu gadoomayo.
Baadiri Camping ayaa markii uu ku fashilmay quraafadkiisa aduunyo gadoonka wuxuu galey dhuumasho isagoo mudo la waysanaa, hase yeeshee maalintii Isniintii ayaa laga warhelay isagoo dadka adeecsan fikirkiisa shaydaanimada ah uga khudbanaya raadiyaha uu maamulo ee ku hadla 87 luuqadood oo Soomaaligu ka mid yahay.
Khudbad uu arinkan kaga hadlayey oo 90 daqiiqo socotey ayuu dadka aaminsan fikirkisia kula hadley isagoo ka soo hadlayey magaalada Oakland ee gobolka California, isagoo sheegay in uu ka xunyahay in ay noqotey oo aanay waxba ka jirin warkii uu sheegay in ahaa ee 21-kii bishan May ay aheyd aduunyo gadoonkii.
Ma ahan markii ugu horeysya ee kooxda Harold Camping dacarta ay aaminsan yihiin dunida u sheegaan ayna noqotay quraafaad sheydaanimo ah waxa ay sheegayaan 6-dii bishii Septmeber 1994-tii ayay sheekadan oo kale oo quraafaadka ah la soo shirtageen iyagoo sheegayay in maalintaasi ay tahay maalintii qiyaamaha oo ay dunidu rogmanayso.